Torohevitra fanatsarana ny pejy fitomboana izay mampitombo ny tahan'ny fiovam-po | Martech Zone
Tsy misy isalasalana fa ny fanatsarana ny pejy fitobiana dia ezaka mendrika ho an'ny mpivarotra rehetra. Ny mailaka moanina dia nametraka an'ity infographic interactive feno amin'ny toro-hevitra fanatsarana ny pejy fitobiana izay mitondra valiny azo refesina. Ireto misy statistika tsara mifandraika amin'ny fanatsarana ny pejy fitobiana.
Nanangona vola mitentina 60 tapitrisa dolara fanampiny ny filoha Barrack Obama tamin'ny alàlan'ny fitsapana A / B
Ny pejy fipetrahana lava dia manana fahaizana mamorona fitarihana hatramin'ny 220% mihoatra ny antso avo-hetsika
48% amin'ireo mpivarotra no manangana pejy vaovao ho an'ny fampielezana marketing rehetra
Ny orinasa dia nanoratra fisondrotana 55% amin'ny fitarihany taorian'ny nampitomboana ireo pejy fandraisana tamin'ny 10-15
Ny fitsapana A / B dia voaporofo fa fomba malaza indrindra amin'ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po
Ny Gmail indray mandeha dia nanandrana aloka 50 hafa loko manga mba hahitana an'io alokaloka iray io ho an'ny CTA izay nanova ny be indrindra
Ny fikarohana izay vitan'izy ireo dia manome lisitr'ireo toro-hevitra fanatsarana ny pejy fiakarana:
olona - fantaro ny personas ny mpihaino kendrenao ary miresaka aminy manokana.
Focus - manomeza fifantohana tokana amin'ny pejy fandraisana ary esory izay fampahalalana tsy misy ifandraisany.
Headline - Ny segondra 3 voalohany dia an'ny lohatenin'ilay pejy ary ho mpamily voalohany na hipetraka na tsia ny mpitsidika.
Fandraisana tahaka - Ny tsipika fandikana rehetra dia tokony hanome lanja sy hitarika ny tantara mody izay hitaona ny fiovam-po.
Antso-To-Action - Mamolavola CTA mazava tsara izay manintona ary miteraka fiovam-po.
Direction - Omeo lalana ny mpitsidika handroahana azy ireo hiova fo. Lazao azy ireo hoe rahoviana, ahoana ary inona no antenaina.
Ampitahao - Ataovy miavaka amin'ny fisaon'ilay pejy ny CTA anao mba hisy mazava tsara ho an'ny mpitsidika ny zavatra hataony manaraka.
Testimonials - Omeo anton-javatra azo itokisana toy ny fijoroana vavolombelona mba hanatsarana ny tahan'ny fiovam-ponao.
whitespace - Ny pejy be atao iray misy singa manelingelina dia mety hahafoana ny fifantohan'ny mpitsidika anao. Ataovy tsotra sy tsotra ny raharaha.
Color - Ny loko dia miteraka valinteny mampihetsi-po. Aza hadino ny mikaroka ny lokonao sy mampifanaraka azy ireo amin'ny persona sy ny fitondranao ezahinao angatahina.
Videos - Andramo ny horonan-tsary amin'ny pejy fitobiana mba hampiakarana ny taham-panovana.
Fampisehoana mivantana - Mampiavaka ny mpifaninana aminao ary farito ny tombotsoan'ny fiovam-po ho an'ireo mpitsidika anao.
Element interactive - Andramo ny popup na hetsika hafa ao amin'ny pejy izay mety hiteraka fahalianana ary hampitombo ny fiovam-po.
mpiara-marika - Ampitomboy ny fahatokisanao amin'ny alàlan'ny fampidirana marika mpanjifa na mpiara-miombon'antoka izay eken'ny mpitsidika anao.
A / B Testing - Andramo ny variana rehetra ao anatin'ny pejinao hipetraka hahitanao ny taha ambony sy ny tahan'ny fiovam-po.
Segmentation - manaova fiovaovan'ny pejin-tranonkalanao mikendry ny fantsona kendrena samihafa.
Ireo fanamby rehetra ireo dia miorina amin'ny zava-misy fa ny pejy fitorianao dia tokony ho manintona sy manao izay hampiasan'ny mpampiasa ny asany ary hanao ny hetsika ilaina. Tsy misy hitsin-dàlana fohy hahazoana fahombiazana ara-barotra optimum. Lavitra lavitra any io, fa miainga amin'ny fifandraisan'ny vinavinanao aminao izany ary te hifandray aminao ianao. Ny pejy fipetrahana dia loharano tsara indrindra hahitana an'io.
Tags: ab testingmiantso amin'ny asalokoctaifantohanafiantsonana pejymari-pejy fananganana marikapejy fandraisanafandaharana pejy fitateranafitarihana pejy fitodianasinga ao amin'ny pejy fitobianafifantohana pejylohatenin'ny pejy fipetrahanatorohevitra fanatsarana ny pejy fitobianafizarana fizaranafitsapana ny pejyOptimizationtoro-hevitra fanatsaranafikarohana olonaolonatokana fifantohanafijoroana vavolombelonatolo-kevitra fivarotana tsy manam-paharoaUSPhoronan-tsary